03/22/13 ~ Myanmar Forward
မင်းကိုနိင် ဆိုတဲ့ လူကို မေးချင်တာက
Posted by drmyochit Friday, March 22, 2013, under တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြ | No comments
လက်ပံတောင်းကိစ္စမှာ သွေးမဆူပဲ ပုံမှန်အခြေအနေပဲ ရှိတဲ့ လူထု ကိုတောင် ခင်ဗျား နားဝင်အောင် နားချနိင် ခဲ့လို့လား ။
ဦးနှမ်းဖြူး ၊ အသက် (၈၈) နှစ်ဆိုပြီး ပါဖောင့်မန့်လုပ် ခင်ဗျားတို့နှင်ထုတ် ခံရတာ သိပ်မကြာ သေးပါဘူး မိတ္ထီ လာ ကိစ္စမှာ ဒေါ သ ထွက်နေတဲ့ သွေးဆူနေတဲ့ လူအုပ်ကို ရဲအယောက် (၈၀) နဲ့ ဘာများ လုပ်စေချင် လို့ လဲ ?
နောက် ခင်ဗျားပြောသွားတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကွန်ယက်တွေကနေ သတင်းတွေရနေတယ် ဆိုတာ..
ခင်ဗျား ကွန်ယက်မှာ မွတ်စလင် ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျား ဘာလို့ ထည့်မပြောခဲ့သလဲ ??
၈၈ မြအေး မွေးထားတဲ့ ကုလား ကိုကိုအောင် ထောင်ထားတဲ့ Myanmar muslin.net ကနေ
သတင်းမှားတွေ တောက်လျှောက်တင်နေတဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ် ခင်ဗျား သိသိကြီးနဲ့ ဘာလို့
ခေတ်က အရင်လို မဟုတ်တော့ပါဘူး ကိုမင်းကိုနိင် ..
တခုခုဆို အစိုးရကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးရမယ့် ခေတ်မဟုတ်တော့ပါဘူး ...
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ အတွက် အပြု သဘော ဆောင်တဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန် ချက်တွေ လိုပါ တယ် ။
ခင်ဗျား နာမည် ကောင်းရဖို့ အတွက် ခင်ဗျား စတေး လိုက်တာ ဗုဒ္ဓ သာသာနာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ...
From : ..မောင်ကာဠု
အရေးပေါ် ကာလ ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက် များနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ရှင်းလင်းချက်
Posted by drmyochit Friday, March 22, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မိတ္ထီလာ ခရိုင်အား အရေးပေါ် အခြေ အနေ ကြေညာ ရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါ ပြဌာန်း ချက်အရ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီနှင့် ညှိနှိုင်း၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတ က ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထုတ်ပြန် ထားသည့် ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သော အမိန့်၊ စာပိုဒ်(၃)တွင် ဖော်ပြ ထား သည်မှာ "ဖွဲ့စည်း ပုံ အခြေ ခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါပြဌာန်း ချက်အရ တာဝန် ထမ်းဆောင် ရာတွင် ထိရောက် မှု ရှိစေရန် တပ်မတော်၏ အကူ အညီကို ရယူဆောင် ရွက်ရမည်။" ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)မှာ လိုအပ်လျှင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခြင်း အတွက် ပြဌာန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းပြဌာန်းချက်ပါ အခွင့်အာဏာကို ရယူကျင့် သုံးခြင်း မရှိသေး ပါ။
ယခု နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါပြ ဌာန်း ချက်အရ အပ်နှင်းထားသည့် အခွင့်အာဏာကို ရယူခြင်းသာ ဖြစ်၍ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး မဟုတ်ကြောင်း သိစေအပ် ပါသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေ အဆင့်(၂)ဆင့်ရှိသည့်အနက် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်သော အခြေ အနေကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ် အားဖြင့် ယခု ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်မှာ "စစ် အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့် Military Administrative Order ပါဝင်ခြင်း မရှိသော မိတ္ထီလာ ခရိုင်အား "State of Emergency ကြေညာခြင်း"သာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း အပ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်သွားပြီ ဟူ၍ နားလည်မှု လွဲမှားနေသူအချို့ ရှိနေခြင်းကြောင့် သိရှိစေရန် ရှင်းလင်း ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
Credit: Hmuu Zaw
Posted by drmyochit Friday, March 22, 2013, under ကြေငြာချက် | No comments
ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့် ထုတ်ပြန်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော် သမ္မ တရုံးမှ ဥပဒေ ကဲ့သို့ အာဏာ တည်သော အမိန့် အ မှတ် (၁/၂၀၁၃) ကို ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အမိန့် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ် သည် -
၁။ မန္တလေး တိုင်း ဒေသကြီး မိတ္ထီလာ ခရိုင် မိတ္ထီလာ မြို့နယ်တွင် တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ပျက်ပြား သည့် အခြေ အနေများ ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် ပြည်သူများ၏လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရေး အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်မှစ၍ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်၍ ထိန်း သိမ်း ဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂။ သို့သော် လည်း ဆူပူ အကြမ်း ဖက်မှု များမှာ ပိုမို များပြား ကျယ်ပြန့် လာပြီး ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်ရုံဖြင့် မိတ္ထီလာခရိုင်အတွင်းရှိ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မလှိုင်မြို့ နယ်နှင့် သာစည်မြို့နယ်များအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ထိ ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် စွမ်း မရှိတော့ကြောင်း တွေ့ရှိ ရသဖြင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင် ရေးကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဖော်ဆောင် ပေးနိုင် စေရန် အတွက် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာ ခရိုင် အတွင်းရှိ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မလှိုင် မြို့နယ်နှင့် သာစည်မြို့နယ် များအတွင်း ယနေ့မှစ၍ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ လိုက်သည်။
၃။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် အရ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိစေရန် တပ်မတော်၏ အကူအညီကို ရယူဆောင် ရွက်ရ မည်။
၄။ ဤအမိန့်သည် ယနေ့မှစ၍ နောက်အမိန့် တစ်စုံတစ်ရာထုတ်ပြန်မှု မရှိမခြင်း အတည်ဖြစ်သည်။
Video From: MRTV 4
Posted by drmyochit Friday, March 22, 2013, under သတင်းများ | No comments
မန္တလေးတိုင်း အမရပူရမြို့ တောင်သမန် အင်း စောင်း လင်း ဇင်းကုန်း သုသာန်ရှိ ထိုင်း ဘုရင် ဟောင်း ဥ တွန် ပုံ၏ အုတ်ဂူမှာ အစစ် အမှန် ဟု အတည်ပြုနိုင် ပြီဖြစ်ကြောင်း တူးဖော် ရာတွင်တွေ့ ရှိရသည့် အထောက် အထား များကို ကိုးကား၍ ထိုင်းသမိုင်း ပညာရှင်များက ပြောဆိုသည်။
အုတ်ဂူကို တူးဖော်စစ်ဆေးရာတွင် အရှေ့ မြောက် ဘက် အရန် စေတီတိုင် အတွင်းမှ အရိုးများ ထည့် ထား သည့် မှန်စီရွှေချ သပိတ် တလုံး နှင့် ပန်းချီရေးဆွဲထားသည့် မှန်ချပ်များတွေ့ရခြင်း၊ ထိုင်း ရာဇအနွယ် ၀င် များ ၏ ထုံးတမ်းဓလေ့နှင့်အညီ မြှုပ်နှံထားခြင်းများကို တွေ့ရသည့်အတွက် မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ သမိုင်းနှင့် ရှေးဟောင်းသုတေသနအဖွဲ့ ဒုတိယခေါင်းဆောင် မစ္စတာ မစ်ကီဟတ် က“အရိုးတွေ သပိတ် ထဲမှာ ထည့်ထား တယ် ဆိုက တည်းက ဘုန်းကြီး ၀တ်နဲ့ ပျံလွန်တော် မူသွားတဲ့ မင်းကြီး ဥတွန်ပုံ ဆိုတာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း သေချာသွားပြီ”ဟု ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
အဆိုပါ မှန်စီရွှေချ မြေသပိတ်သည် အကျယ် ၈ . ၅ လက်မ၊ အမြင့် ၅ . ၅ လက်မရှိပြီး နှုတ်ခမ်းနားတွင် ရွှေချ ထားကြောင်း၊ သပိတ် အဖုံး လက်ကိုင်မှာ ကြာဖူးပုံသဏ္ဍာန် ပြုလုပ်ထားပြီး သို့သော် ကျောက်စာ ကမ္ပည်းဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ရေးထိုးထားခြင်းမရှိဟု သိရ သည်။
ဤအုတ်ဂူသည် ကျောက်ဘွားဒေါက်မဒူဝါး ဘွဲ့ခံ ထိုင်းဘုရင်ဟောင်း မင်းသားကြီး ဥတွန်ပုံ ၏ အုတ်ဂူ အစစ် အမှန် ဖြစ်ကြောင်း မကြာ မီ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မြို့၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ မစ်ကီဟတ်က ပြောသည်။
ယင်းအရိုးများထည့်ထားသည့် မှန်စီရွှေချ မြေသပိတ်ကို မန္တလေးမြို့တော် ၀န်ထံ ယာယီ အပ်နှံ ထားကြောင်း၊ အနီး အနားရှိ တခြား သော ထိုင်းအနွယ်များ၏ အုတ်ဂူများကိုလည်း ဆက်လက် တူးဖော်နိုင် ရန် မြန်မာ အစိုးရ ထံတွင် ထပ်မံခွင့်တောင်းထားကြောင်း၊ ထို့အပြင် အုတ်ဂူအား ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ ညှိနှိုင်း၍ ဆက်လက်ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းဘုရင်အုတ်ဂူနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းသမိုင်းပညာရှင်များအကြား တူးဖော်သင့် မသင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အငြင်း ပွားနေရာ ပြီး ခဲ့သည့် နှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက ယင်းအုတ်ဂူရှိသည့် လင်းဇင်းကုန်း သုသာန်ကို ဖျက်သိမ်း ရန် ဒေသအာဏာပိုင်များက စီစဉ်နေကြောင်း ဧရာဝတီသတင်း ဌာနမှ ဖော်ပြလိုက်ပြီးနောက် ဘန်ကောက် အခြေစိုက် ထိုင်းအသိပ ညာ ပြန့်ပွားရေး အသင်း (Siam Society)မှ အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး တူးဖော် ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးတိုင်း ရှေးဟောင်းသုတေသန ဦးစီးမှူး ဦးညိုမြင့်ထွန်းကလည်း ထိုင်းဘုရင်ဟောင်း၏ ဂူဖြစ်သည့် ဤ အထိမ်းအမှတ် စေတီ ကို နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက် ဆက်လက်ထားရှိမည်ဆို လျှင် ရှေးဟောင်း သုတေ သနဌာန အနေဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုအခါ အဆိုပါ အုတ်ဂူတည်ရှိရာ လင်းဇင်းကုန်း သုသာန်သည် မန္တလေးမြို့ပြဖွံဖြိုးမှု စီမံကိန်း အကောင် အထည်ဖော်မည့် ဧရိယာ အတွင်း၌ ပါဝင်နေသည့်အတွက် ဖျက်သိမ်းရန် မန္တလေး စည်ပင်သာယာရေးက လုပ်ဆောင် လျက်ရှိသည်။
မန္တလေး စည်ပင်သာယာ သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ ဗိုလ်မှူး နေ၀င်းမြင့် က“ကျနော်တို့အနေနဲ့ အစိုးရတို့၊ လွှတ်တော်တို့ကို တင်ပြမယ်၊ ထိန်းသိမ်းဆိုရင် ထိန်းသိမ်းပေးမယ်၊ တောင်လေးလုံး ကျောင်းထဲမှာ ထားမယ်ဆိုလည်း ရတယ်”ဟု ဆိုသည်။
တောင်သမန်အင်းစောင်း၌ အများပြည်သူ အပန်းဖြေနိုင်ရေး အတွက် မန္တလေးတိုင်း စည်ပင်သာယာရေးမှ ဆောင် ရွက်နေရာ သက်တမ်းရင့် မယ်ဇယ်ပင်ကြီးများကို ကျောက်စီနံရံများ ကာရံ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အမှိုက်ပုံ များ ရှင်းလင်းခြင်း နှင့် လင်းဇင်းကုန်း သာန်ကိုလည်း ပြောင်းရွှေ့ခြင်း များ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
တောင်သမန်အင်းစောင်းရှိ ကမ္ဘာကျော် ဦးပိန်တံတား အနီး ဤ ထိုင်းဘုရင့် အုတ်ဂူကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ထိုင်းလူမျိုး များ လာရောက် ပူဇော်လေ့ရှိသည့် အတွက် မန္တလေး ဒေသအာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် ပြုပြင်ထိန်း သိမ်း လိုက်မည်ဆိုပါက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ် ငန်းကို အထောက် အကူပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာ သူများနှင့် ပညာရှင်များ က ပြောဆိုကြသည်။
Posted by drmyochit Friday, March 22, 2013, under ဆောင်းပါး |2comments
မိတ္ထီလာမြို့ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် သေဆုံးသူ (၅)ဦး ထပ်မံ ရောက်ရှိလာသဖြင့် သေဆုံးသူ (၁၀)ဦး ရှိလာခဲ့
(မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍)
မိထ္ထီလာမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သေဆုံးသူ (၅) ဦး ထပ်မံ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာ ရရှိသူ အရေ အတွက်မှာလည်း စုစုပေါင်း(၄၅) ဦးအထိ ရှိလာကြောင်း မိထ္ထီလာမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှ အမည် မဖော် လိုသူ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက Eleven Media Group သို့ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများမှ ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းများအရ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် သေဆုံးသူ (၅) ဦးရှိခဲ့ သဖြင့် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ ယခု အချိန်အထိ ဖြစ်ပွား နေသော မိထ္ထီလာ ပဋိပက္ခတွင် သေဆုံး သူ (၁၀) ဦးရှိလာခဲ့ကြောင်း ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်အချိန်အထိ တရားဝင် ရရှိသော သတင်းများအရ သိရပါ သည်။
"လက်ရှိ အချိန် အထိ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ (၁၀) ဦး ရှိပါပြီ။ ဒဏ်ရာရသူက (၄၅) ဦးပါ။ အများစုက မီးလောင် ဒဏ်ရာ၊ ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ၊ တုတ်နဲ့ ရိုက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းတွေကဆေးရုံကို ရောက် လာတဲ့ စာရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံအနေနဲ့ ရောက်ရှိလာတဲ့ လူနာတွေကို ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်ဖို့ ၀န်ထမ်း အင်အား၊ အရေးပေါ် နေရာတွေ တိုးချဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု မိထ္ထီလာမြို့ ပြည်သူ့ဆေး ရုံမှ တာဝန်ရှိသူက Eleven Media Group သို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ခိုးယူရန် အိမ်တွင်းဝင်စဉ် လူမိ၍ ဓားဖြင့်ခုတ် တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေး
Posted by drmyochit Friday, March 22, 2013, under မှုခင်း | No comments
ရန်ကုန်တိုင်း မရမ်းကုန်း မြို့နယ် (အမှတ် ၃၃)၊ ရွှေနှင်း ဆီးကန်လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်နေ ဒေါ်ဝင်း ၀င်းမော် ၏ နေအိမ်တွင ၂၁-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ည ၂၀၀၀ အချိန်မှာ သူခိုး ၀င်ရောက်ရာ လူမိ သွား သဖြင့် သူခိုးက ဓားဖြင့်ခုတ် တိမ်းရှောင် ထွက်ပြေး သွားကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်း ရဲတပ်ဖွ့မှ သတင်း ရရှိ ပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် (ဘ) ဦးကြီးနှင့် (သား) စိုးကျော်စွာ၊ (သမီး) လင်းထက်ရီထွန်း၊ (ညီမ) ခင်စိုးဦး တို့သည် မြေညီထပ်တွင် (TV) ကြည့်ပြီး ထမင်း စားရန် ထမင်းစားခန်းသို့ အသွား အ၀တ်လျှော်စက် အနီးတွင် အသက် (၂၀) ကျော်ခန့် မျက်နှာသွယ်၊ ဆံပင် အနက်တို၊ ခန္ဓာကိုယ်သွယ်၊ အရပ် ၅’၃” ခန့်၊ စွပ်ကျယ် အဖြူ၊ လောင်းဘီ တို့ ၀တ်ဆင်သူ လူငယ်တစ်ဦးသည် အသင့် ပါလာသော ဓါးဖြင့် ခုတ်သတ် ခဲ့တယ်လို့ သိရပါသည်။
သူခိုးက ဓါးဖြင့် ခုတ်မှုကြောင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်ထွဋ်တွင် (ယာ) လက်မောင်း ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ၊ (၀ဲယာ)လက်ဖ၀ါး ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ၊ (၀ဲ) လက်ဖျံ ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ ၊ စိုးကျော်စွာတွင် ဦးခေါင်း ပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာ၊ (၀ဲ) လက်မောင်း ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ၊ (အောက်)နှုတ်ခမ်း ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ၊ လက်လက်ရီထွန်းတွင် နဖူး၊ ၀ဲပါး၊ နှာခေါင်း ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ၊ ဒေါ်ခင်စိုးဦးတွင် (၀ဲ) လက်ခလလယ်/လက်သူကြွယ် ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ အသီးသီး ရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အဆိုပါ ဒဏ်ရာ ရသူများကို မြောက် ဥက္ကလာပ ဆေးရုံတွင် အတွင်း လူနာ (မစိုးရိမ်ရ) အဖြစ် ကုသလျက် ရှိပါသည်။
တရားခံမှာ အိမ်ရှင် မိသားစုက အော်ဟစ် အကူအညီ တောင်းစဉ် နောက်ဖေး အုတ်တံတိုင်း ကျော်ထွက်ပြေး သွားသဖြင့် မရမ်းကုန်း ရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့် အရေးယူရန် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး၊ မသင်္ကာ တရားခံ ဖမ်းဆီးရမိရေး၊ တိုင်း/ခရိုင် အထူး အဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ခွဲ စုံစမ်း လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မိတ္ထီလာတွင် ကွန်ယက်တွေအများကြီးရှိကြောင်း မင်းကိုနိုင်ပြောသော်လည်း မီးလောင်နေသော အဆောက်အအုံများအား ဘယ်ကွန်ယက်ကမှ လာ၍ မီးကူငြှိမ်းပေးခြင်းမရှိ
မိတ္ထီလာတွင် ကွန်ယက်တွေအများကြီးရှိကြောင်း မင်းကိုနိုင်ပြောသော်လည်း၊ မျက်ခြေ မပျက် စောင့်ကြည့် နေကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးပြောသော်လည်း မီးကူငြိမ်းပေးသူ တစ်ယောက်မှ မရှိ တာကြောင့် လုံခြုံရေး တာဝန် ယူထားသော ရဲတပ်ဖွဲ့များမှ လုံခြုံရေးမလုပ်ရပဲ မီးငြိမ်းနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လူနေ စိပ်သော မိတ္ထီလာမြို့တွင် အဆောက်အအုံကြီးများကို မီးလောင်နေသဖြင့် မီးညွန့်ကျိုးအောင် မနည်းငြိမ်း နေရာပြီး မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် မီးငြိမ်းရာနေရာသို့ ရောက်ရှိ နေကြောင်း သိရ သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် နှင့် အဖွဲ့ မိတ္ထီလာသို့ရောက်နေသည် ဆိုသော်လည်း မီးလောင် ရာနေရာ သို့ ရေတစ်ပုံး ခပ်ကာ လောင်းပေးခြင်း မရှိပဲ ကားလျှောက် စီးနေကြောင်း သိရသည်။ မင်းကိုနိုင် မှ မိတ္ထီလာတွင် ၎င်းတို့၏ ကွန်ယက် အများ အပြား ရှိသည်ဟု ပြောခဲ့ပြီး NLD ဦးဝင်းထိန်လည်း ရောက်နေ ကြောင်း သိရသော်လည်း မည်သည့် ကွန်ယက် နှင့် မည်သည့် NLD မှ ဝိုင်းဝန်း မီးငြှိမ်း ပေးတာမျိုး လုံးဝ မရှိကြောင်း သိရသည်။
မီးသတ် အင် အားဖြင့် မလုံလောက် သောကြောင့် လုံခြုံရေး အဖွဲ့များက မီးငြှိမ်း သတ်နေရ သည်ကို မီဒီယာ သမားများက တွေ့မြင် ကြသော်လည်း ဝင်ရောက်ကူညီ ငြှိမ်းသတ်ခြင်း တစ်ယောက်မှ မရှိသည့် အပြင် လုံခြုံရေး အားနည်း သည်ဟုသာ အကြိမ်ကြိမ် ရေးသား ဖော်ပြလျှက် ရှိကြသည်။
တစ်ကယ် ပြဿနာ ဖြစ်ပြီဆိုလျှင် မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်အောင် လုပ်နေတဲ့ ၈၈ ကလူတွေ ဘယ်ချောင် မှာ ၀င်အိပ်နေ သလဲ။ ပြဿနာလေး ငြိမ်သွားပြီ ဆိုလျှင် ၈၈ ကလူတွေ အသံကောင်း ဟစ်ပြီး ထွက်လာကြ လိမ့်ဦးမည်။
Eleven Media Group ကဖော်ပြတဲ့ မိတ္ထီလာမြို့ နေ့လည် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ် အချိန် အခြေအနေ
Updated (မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍)
မိထ္ထီလာမြို့၏ လက်ရှိ အခြေအနေသည် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု အခြေအနေမှ ဖောက်ထွင်း လုယက်မှုများ လုပ်ဆောင် သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း မိထ္ထီလာမြို့ရှိ အမည်မဖော်လိုသူ လုံခြုံရေး အရာရှိ တစ်ဦးက Eleven Media Group သို့ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် မိထ္ထီလာ မြို့တွင်း၌ တုတ်၊ ဓားကိုင်ဆောင်ပြီး သွားလာနေသူများကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး လျက်ရှိပြီး ဖောက်ထွင်း လုယက် ပစ္စည်း သယ်ဆောင်လာသူများကိုလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်၊ မှတ်တမ်းယူပြီး ပစ္စည်းကို ပြန်လည် သိမ်းဆည်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု မိထ္ထီလာမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည့် Eleven Media Group သတင်းထောက်က ပြောပါသည်။
ထို့အပြင် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အတွက် လုံခြုံရေး တာဝန် ယူထားသူများ အနေဖြင့် အင်အား မလုံလောက်မှု ပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရပါသည်။
မိထ္ထီလာ အရေးအခင်းမှ ဓာတ်ပုံများ
Posted by drmyochit Friday, March 22, 2013, under ဓါတ်ပုံသတင်း | No comments
ကြားရတဲ့ သတင်းတွေက ယုံလို့ မရတဲ့ အနေ အထား၊ ဆူပူ မှုကို ပိုမို ဖြစ်စေတဲ့ အနေ အထားတွေ ဖြစ်နေပါ တယ်။ ဒီပုံတွေကတော့ အင်တာနက်က ပုံတွေပါ။ အခြား ဘာသာရဲ့ ဆိုက်တွေ မှာတော့ မဟုတ် တာတွေကို ၀ါဒဖြန့်နေကြပါတယ်။ မြန်မြန်ပြီးဆုံး ပါစေလို့ ဆုတောင်းယုံက လွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ။
ဓါတ်ပုံ တွေကတော့ အင်တာ နက်မှာ ဖော်ပြ ထားတဲ့ Eleven နဲ့ myanamr Journal Facebook က ပုံတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။
Posted by drmyochit Friday, March 22, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ရည်းစား ဖြစ်သူနှင့် စကားများ ကြပြီးနောက် သင်ခန်းစာ ပေးလို သောကြောင့် အိပ်ပျော် နေချိန်တွင် ငယ်ပါကို ဖြတ်ကာ ရေအိမ်ထဲ ချပစ်ခဲ့သော မှုခင်း တစ်ခု အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အသက် ၄၁ နှစ် အရွယ်ရှိ ဂျူလီယာ မူနော့ဇ် ဆိုသူသည် ၎င်း၏ ရည်းစားဖြစ်သူ အသက် ၄၆ နှစ် အရွယ်ရှိ ရေမွန် အေးရိစ် ဆိုသူနှင့် စိတ်ဆိုးကာ စကားများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ ကြကြောင်း အိမ်နီးချင်း ဘရီနာ လီမာက ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀င်များသို့ ပြောပြ ခဲ့သည်။
ဂျူလီယာတို့ နေထိုင်သည့် အိမ်ထဲတွင် အော်သံများ ကြားရသောကြောင့် လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အိမ်နီးချင်းများ သွားကြည့်ရာတွင် အေးရိစ်နှင့် ဂျူလှီယာတို့၏ သွေးလွှမ်းနေသော အဖြစ် အပျက်ကို ကြုံတွေ့ ခဲ့ ကြရသည်။ ဂျူလီယာသည် လက်ထဲတွင် မီးဖိုချောင်သုံး ဓားတစ်လက်ကို ကိုင်ထားပြီး ရဲများက ဖြောင့်ဖျကာ ထိန်းသိမ်း သွားရသည်။ အေးရိစ် ကိုမူ ဆေးရုံသို့ ပို့လိုက်ရပြီး အရေးပေါ် ခန်းတွင် အတွင်း လူနာ အဖြစ် စောင့်ရှောက် ထားရသည်။
မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် ဤမျှ စိတ်နာပြီး လုပ်ဆောင် ခဲ့ရကြောင်းကို ယခုအထိ သတင်း မရရှိ သေးပေ။ ဂျူလီယာကို စိတ်ကျန်းမာရေး အတွက် ရက်ပေါင်း များစွာ ကုသရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခု ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး ဂျူလီယာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ဒဏ် ကျခံ ရဖွယ် ရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်း မီဒီယာသို့ ပြောကြား ခဲ့သည်။
မိတ္ထီလာတွင် သတင်းထောက်များ ခြိမ်းခြောက် ခံနေရ
မိတ်ထီလာမြို့မှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ ပဋိပက္ခ အခြေအနေတွေကို သတင်း ရယူ နေတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်း ထောက်တွေရဲ့ ကင်မ ရာတွေကို အကြမ်းဖက် လူအုပ်စု အချို့က အတင်း အဓမ္မ သိမ်းယူ သလို ရိုက်နှက် မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက် ခံနေ ရတယ်လို့ သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် ကော်မတီက သတင်း ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် ကော်မတီ အနေနဲ့ မိတ္ထီလာမြို့နဲ့ သွားရောက် သတင်း ယူနေတဲ့ သတင်း သမား တွေရဲ့ လုံခြုံ ရေးကို အထူး စိုးရိမ်ပြီး သတင်း သမားတွေ အပေါ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အတင်း အကျပ် ဖိအား ပေးခြင်း တွေအပေါ် အပြင်း အထန် ရှုတ်ချ တယ်လို့ ကြေညာ ချက်က ဆိုပါတယ်။
အစိုးရ တာဝန် ရှိသူတွေ၊ မိဘ ပြည်သူ တွေအနေနဲ့ သတင်းမှန် တွေကို တင်ပြနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေတဲ့ သတင်း မီဒီယာ သမား တွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို အထူး ဂရုစိုက် ပေးဖို့နဲ့ သတင်း သမားတွေ အနေနဲ့လည်း လုံခြုံ ရေးနဲ့ ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေးကို အထူး ဂရုပြု ကြဖို့လည်း တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။
"မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်စိုး မှ ရပ်ကွက်အစည်းအဝေး တွင် စိန်ခေါ်"
Posted by drmyochit Friday, March 22, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
(20-3-2013)နေ့က မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် ရပ်ကွက် အထောက် အကူပြု ဖွံ့ ဖြိုးရေး ကော်မတီ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ပွဲပြု လုပ် ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ပွဲသို့ တက်ရောက် လာကြသော မုံရွာ တောင်ရပ် ကွက်နေပြည် သူ လူထုများ မုံရွာမြို့နယ် အုပ်ချုပ် ရေး မှူးရုံးမှ ဒုဦး စီးမှူး နှင့် ရပ်ကွက် စာရေးမ တို့၏ ရှေ့မှောက် တွင် မုံရွာတောင် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေး မှူး ဦးတင်စိုး မှ စိန်ခေါ်စကား များပြောကြား ခဲ့ကြောင်း မုံရွာတောင် ရပ်ကွက်နေ ပြည် သူများ ထံမှသိရပါတယ်။
"တင်စိုး ကို အင်တာနက်တင်လိုတင် ဟိုတိုင် ဒီတိုင် လုပ်ကြတဲ့ သူတွေကို တင်စိုး ဆိုတဲ့ကောင်က ဂရုမစိုက် ဘူး။ ၀န်ကြီး ချုပ်တောင်မှ ငါ့ကို မဖြုတ် ရဲလို့ အသာကြည့်နေ ရတာ။ ဟော့ဒီ မုံရွာတောင် ရပ်ကွက် ရုံးကို မီးရှို့ လို့ရတယ်။ တင်စိုး ဆိုတဲ့ကောင်က အလျှော်ပေးနိုင်တယ်။သိန်း ဘယ်နှစ်ထောင် ပေးရ ပေးရ ပေးနိုင် တယ်။ မယုံရင် အိမ်ကို လိုက်ခဲ့ကြ အထုပ်လိုက် အထည်လိုက် ပြမယ်။လောကမှာငွေ ရှိရင် ကြိုက်တာ လုပ်လို့ ရတယ်"ဟု ပြောဆိုခဲ့တယ် အဆိုပါ အစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက် ခဲ့သူက သလ္လာ ၀တီတိုင်းမ် သို့ ပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။
မုံရွာတောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်စိုးသည် မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် မြေယာ ကိစ္စများတွင် အရှုပ် အရှင်းပြ သနာများ ကို ဖြေရှင်းနေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။
Than Lar Waddy Times
ကားကြီးဝင်းအနီး သီရိမင်္ဂလာ(ခ)ရပ်ကွက်တွင် မူဆလင်များက သူ့အိမ်သူ မီးရှို့ပစ်၊ ဗမာများက ဓားနှင့်လိုက်ခုတ်။ ဗမာကောင်မလေး နှစ်ယောက် ဓားခုတ်ခံရ။ အပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ် ခုတ်ထစ်ပစ်ကြ
၂၁-၃-၂၀၁၃-ရက်နေ့ မွန်းတည့် (၁၂း၀၀) နာရီ ခန့်တွင် ပုလိပ်ကားကြီး (၆) စီးဖြင့် မွတ် ဆလင်များ ကယ် ထုတ် တင်ဆောင် သွားသည် ကိုတွေ့ ရ။ ဘယ်ရပ် ကွက် ကမှန်း မသိရ။
မွန်းလွဲ (၁၂း၃၀) နာရီ ခန့်တွင် နာရီ စင် ဘက်မှ ဆိုင်ကယ်များ အမြန် မောင်းနှင် လာ။ ကုလားတွေ နာရီ စင် ဘက် ချီတက် လာပြီး။ ဗမာတွေ ကို ဓားတွေနှင့် လိုက် ခုတ်နေပြီဟု အော်ပြော သွား။ ဓာတ်တိုင်တွေ ခေါက် ပြီး အချက်ပေးကြ။ လုံခြုံရေး တွေ တောင်းကြ။ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွား ကြည့် ခိုင်းရာ ဘာမျှမတွေ့ရ။
ကားကြီးဝင်း အနီး သီရိမင်္ဂလာ(ခ)ရပ်ကွက်တွင် မူဆလင်များက သူ့အိမ်သူ မီးရှို့ပစ်၊ ဗမာများက ဓားနှင့် လိုက်ခုတ်။ ဗမာကောင်မလေး နှစ်ယောက် ဓားခုတ်ခံရ။ အပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ် ခုတ်ထစ်ပစ်ကြ။ မွတ် ဆလင် များရာ ရပ်ကွက် တွေမှ ဗမာ အိမ်များ မီးရှို့ ခံနေရ ချိန်တွင် ဗမာ များကလည်း မွတ် ဆလင် များ အိ မ်ကို မီးရှို့ပစ်ကြ။ မွတ်ဆလင်ပိုင် အိမ်များကို မီးလိုက်ရှို့နေ။ မွတ်ဆလင်ပိုင် နှင်းပုလဲ တည်းခိုခန်း မီးထဲ ပါသွား။
ဦးရာ လူ စနစ်ဖြင့် မီးရှို့နေ။ မီးခိုးလုံးများကို မြင်နေရ။ ညနေ(၆း၁၀)နာရီတွင် ချမ်းအေးရပ်ကွက်မှ မူဆ လင်များ ကိုယ့် အိမ်ကို မီးရှို့ပစ်ကြ။ စာရင်းစစ်ရုံး၊ ပညာရေးရုံးများလည်း မီးထဲပါသွား။
ညနေ(၆း၃၀)နာရီတွင် အလံဖြူထောင်ထားသော မူဆလင်တန်းကြီး သီရိမင်္ဂလာ(ခ)ရက်ကွက်မှ ထွက်လာ။ ကလေးငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ အဖိုးအဖွားများ ရှေ့တန်းမှာဦးဆောင်လာကြ။ အရွယ်အမျိုးစုံ အမျိုးသားများလည်း အနည်ငယ်ပါ။ အားလုံး ခေါင်းပေါ်လက်တင်လာကြ။ အသက်(၆၀)အရွယ် အဖိုးကြီး များလည်းပါ။ ထိုင်ပါရစေ၊ ထိုင်ပါရစေ၊ အော်ဟစ် ငိုယို တောင်းပန် သူများ လည်းရှိ။
အလံဖြူ ထောင် အဖွဲ့ကြီးသည် မြနန္ဒာ တိုက်နှင့် ကြေနန်းစာ တိုက်ကြား ရှိ အဝေးပြေး လမ်းမ ကြီးပေါ်တွင် ထိုင်ခိုင်း ထား။ လက်နက်ဆို၍ အပ်တိုတစ်ချောင်းပင် မပါကြကြောင်း အစစ်ဆေးခံကြ။ ထိုင်နေသော လူတန်းကြီး သည် စာတိုက်ရှေ့မှ တောင်ဘက် မီးပွိုင့်ထိ ရှည်ကြောင်း၊ ဦးရေတစ်ထောင်ကျော် ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်း ရ။ ခရိုင်အားကစားကွင်းထဲမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ပေးထား။
From : ..အရှင်ဝီရသူ
အိမ်ထောင် ဦးစီး တဦး ၀ ဥ ရှာဖွေယင်း ၀က်ဝံ အကိုက်ခံရ
ချင်းပြည်နယ် မတူပီမြို့လောင်ဗန်း ရပ်ကွက်နေ ပူး ခဲန်ဟုန်း (ကွီစားရွာ ဇာတိ) ဆိုသူ သည် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ က တောထဲ သို့ ၀ ဥ ရှာနေချိန် ၀က်ဝံ အကိုက် ခံရ သည်ဟု ကြားသိ ရသည်။
ပူး ခဲန်းဟုန်းသည် မတူပီ မြို့နယ် တန်ကူ ရွာသို့ သူ့ ဇနီးနှင့် အတူ ၀ ဥ ရှာရန် သွား ကြပြီး သူ့ဇနီး၊ သူ့ ယောက္ခ မနဲ့အတူ တောထွက် ၀ ဥ ရှာချိန်တွင် ယခုလို အဖြစ် ဆိုးနဲ့ ကြုံ ရခြင်း ဖြစ်သည်။
“ ၀က်ဝံ ကိုက်သည့် ဒါဏ်ရာကြောင့် မေးရိုး တဖက် မရှိတော့တဲ့ အပြင် နှာခေါင်း လည်း မရှိတော့ဘူး၊မျက်နှာ တခုလုံး မှတ်မိ စရာမရှိ၊ ကြည့် ရက်စရာ တောင်မ ရှိတော့ဘူး” ဟု မျက်မြင် တဦးက ပြောသည်။
ပူး ခဲန်းဟုန်းသည် သူ၏ ဇနီး၊ ယောက္ခမနဲ့အတူ တောထဲ သွားကြပြီး ပူး ခဲန်းဟုန်း တဦးတည်း ရှာပြီးသား လက်ကျန် ၀ ဥ ကို သွားသိမ်း ချိန်မှာ သူ၏ ထိတ်လန့်တကြား အော်ဟစ် သံကို သူ့ဇနီးနဲ့ သူ့ယောက္ခမ က ကြားလို့ အပြေး အလွှား သွား ကြည့်ရာ မှ ဖြစ်စဉ်ကို သိသွား ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
လူနာ ပူး ခဲန်းဟုန်းကို ည ၁၂ နာရီမှာ တန်ကူ ရွာကို ပြန်သယ် လာကြပြီး ည တွင်းချင်း မတူပီ ပြည် သူ့ဆေးရုံ သို့ ပို့ကြသော် လည်း သက်ဆိုင် ရာမှ မန္တလေး အရေးပေါ် ဆေးရုံသို့ ဆက်လက် ပို့ရန် ညွန်ကြား ထားကြသည်။
“ အသက်ရှင် တယ်ပဲထား၊ လူစဉ် မှီဖို့နဲ့ သူ့မိသားစု ရှေ့ရေး အတွက်က ရင်လေး စရာပါ” ဟု ဆလိုင်း ရိုကုန်းက ပြောသည်။
လေ့လာသူ အသီးသီးက မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း အဆင်း ရဲဆုံး ပြည်နယ် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံ ဒေသရှိ ချင်းပြည် သူများသည် မိသားစု စားဝတ် နေမှု ဖူလုံ ရေး အတွက် သဘာဝ တောထွက် ၀ ဥ ၊ သစ်ခွ ရှာဖွေ ရောင်းချခြင်း ကို အဓိက အားထား နေကြ သည်။
တရုတ် အိုင်ပီ လိပ်စာ ကနေ တောင် ကိုရီးယား အင်တာနက် ဆာဗာ များကို တိုက်ခိုက်
တရုတ် နိုင်ငံမှာ အခြေခံ ထားတဲ့ အိုင်ပီ လိပ်စာ တခု ကနေ တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံ ရေဒီယို၊ ရုပ်သံလွှင့် ဌာနတွေနဲ့ ဘဏ်တွေရဲ့ အင်တာနက် ဆာဗာ တွေကို မနေ့က ထိုးဖောက် ခိုးဝင် တိုက်ခိုက် လာတယ်လို့ ဆိုးလ်မြို့ အာဏာပိုင် တွေက ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ဒီ တိုက်ခိုက် မှုမှာ YTN, MBC နဲ့ KBS တီဗီဌာ နတွေနဲ့ အဓိက စီးပွားရေး ဘဏ် ၂ ခု ဖြစ်တဲ့ ရှင်ဟန် ဘဏ်နဲ့ နွန်ဟျပ် ဘဏ်တွေရဲ့ ဆာဗာ ကွန်ရက် တွေကို ဖြုတ်ချ ခဲ့တာပါ။ ခု တိုက်ခိုက် မှုကြောင့် အဖွဲ့ အစည်း ၆ ခုက ကွန်ပျူ တာ ၃၂၀၀၀ ကို သက်ရောက် ထိခိုက် သွားတယ်လို့ တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံပိုင် အင်တာနက် လုံခြုံ ရေး အေဂျင်စီက ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
တောင် ကိုးရီးယား အင်တာနက် လုံခြုံရေး အေဂျင်စီ အဖွဲ့ဝင်များ ဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက် ခံရမှု ဖြစ်စဉ်အား စစ်ဆေး (ဓာတ်ပုံ- AFP)
သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ချက်တွေ နဂို မူလ အတိုင်း အပြည့် အ၀ ပြန်ဖြစ်အောင် ၅ ရက်လောက် တော့ အချိန် ယူရမယ် လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဘဏ်လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုတွေ နဂို အတိုင်း ပြန်ဖြစ် လာစေဖို့ ဘဏ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချိန် ကြန့်ကြာခဲ့ ရပြီး တီဗွီ ဌာန တွေရဲ့ ထုတ်လွှင့်မှု တွေကတော့ ပြတ်တောက် သွားမှု မရှိပေ မယ့်လည်း ရုပ်သံ ကွန်ရက် တွေရဲ့ ဆာဗာတွေ အကြီးအကျယ် ထိခိုက် ပျက်စီး သွားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
စုံစမ်း တွေ့ရှိ ထားတဲ့ အိုင်ပီ လိပ်စာဟာ တိုက်ခိုက် မှု အတွက် ပြုံယမ်း အစိုးရမှာ တာဝန် ရှိတယ်လို့ ညွှန်ပြနေကြောင်း တောင် ကိုရီးယား သမ္မတရုံးမှ အမည် မဖော် ထားတဲ့ တာဝန် ရှိသူ တယောက် ပြောကြား ချက်ကို ကိုး ကားပြီး ယွန်ဟက်ပ် သတင်း ဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
အရင်က တောင် ကိုရီးယား သတင်းစာ တစောင်အပေါ် တိုက်ခိုက် မှုမှာလည်း တရုတ် အိုင်ပီ လိပ်စာ တခုကို သုံးစွဲ ထားတဲ့ မြောက် ကိုရီးယားကို ဆိုးလ် အစိုးရက ခြေရာ ခံမိ ထားပါတယ်။ တောင် ကိုရီးယား အစိုးရ ကလည်း သတိပေး တပ်လှန့်မှု အဆင့်မြှင့် ထားခဲ့ ပါတယ်။
တောင် ကိုရီးယား အဖွဲ့ အစည်း တွေအပေါ် အင်တာနက် လုံခြုံရေး ခိုးဝင် ထိုးဖောက် ခဲ့တဲ့ အရင် ဖြစ်ရပ် တွေကို စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု တွေအရ တောင် ကိုရီးယား ကွန်ပျူတာ ကွန်ရက် တွေကို စိမ့်ဝင် ထိုးဖောက်ဖို့ လေ့ကျင့် ပေးထားတဲ့ ပြုံယမ်း အစိုး ရရဲ့ ကွန်ပျူတာ အင်ဂျင် နီယာ တပ်ဖွဲ့ကြီးကို ခြေရာ ခံမိ ထား ပါတယ်။
မြောက် ကိုရီးယား ကတော့ သူဟာ ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှု ခံရတဲ့ သူပါလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ပြောကြား ထားပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင် စုကို အပြစ်တင် ထားပြီး လက်တုံ့ ပြန်မယ် လို့လည်း ခြိမ်းခြောက် ထားပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မုန်တိုင်းကြောင့် ၉ ဦးသေဆုံး
တရုတ် နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန် ပြည်နယ်မှာ မုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၉ ဦး သေဆုံး သွားပြီး ၂၇၂ ယောက် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံ အစိုး ရက ဒီနေ့ ပြောကြားပါတယ်။
တုံကွမ်မြို့တော်မှာ မတ် ၂၀ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက မိုးသက် မုန်တိုင်း တိုက် ခတ်ပြီး မိုးသီး တွေလည်း ကျလာ ခဲ့တာပါ။ လေတိုက် နှုန်းက ၁ နာရီ ၁၇၆.၈ ကီလို မီတာ အထက် ရှိပြီး ဆီးနှင်း ထုက ၄၀.၆ မမ အမြင့် ထိတောင် ရှိတယ်လို့ တုံကွမ် မြို့တော် အစိုးရရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ တုန်ဟောင်ချွမ်က ပြောပါ တယ်။
မိုးလေ ၀သ မှတ်တမ်း စတင် ထားရှိချိန် ကတည်း ကဆိုရင် အခု တိုက်ခတ် တဲ့မုန် တိုင်းဟာ တုံကွမ်မှာ အင်အား အပြင်းဆုံး တော်နေဒို ဖြစ်တယ်လို့ တုန်က ဆိုပါတယ်။ ပျက်စီး ဆုံးရှုံး မှုတွေကို စာရင်း ပြုစု နေဆဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
မိတ္ထီလာမြို့တွင် အခြေအနေ တည်ငြိမ်မှု မရှိသေးသော်လည်း ယမန်နေ့ညကလောက် ဆိုရွားခြင်း မရှိတော့
မိတ္ထီ လာမြို့ သိရိမင်္ဂလာ ရပ်ကွက် အတွင်းမှ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ကလေး လူကြီး များအား မိတ္ထီလာ ခရိုင် အားကစားကွင်း အတွင်းသို့ တာဝန် ရှိသူများ အရပ်ဘက် အဖွဲ့ အစည်း များနှင့် သံဃာတော် များက ပို့ဆောင် ပေးနေစဉ်
မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရွှေအရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ရာမှ စတင်ခဲ့သော မိတ္ထီလာမြို့မှ ပဋိပက္ခ အခြေ များမှာ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းအချိန်ထိ ပြန်လည်တည်ငြိမ်မှု မရှိသေးသော်လည်း ယမန် နေ့ည ပိုင်းကလောက် ပြင်းထန် ဆိုးရွားမှု မရှိတော့ကြောင်း Eleven Media Group သတင်းထောက်၏ သတင်းပေး ပို့မှု အရ သိရပါသည်။
ဆူပူမှု များအား ထိန်းသိမ်း ရန် အတွက် ယမန်နေ့ ညက ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန် ခဲ့သော်လည်း ဆူပူသူ လူစု လူဝေးမှာ နေအိမ် များအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီး သေဆုံးသူ ငါးဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၂၂ ဦး ရှိကြောင်း မိတ္ထီလာ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှ တာဝန် ကျ ဆရာဝန် တစ်ဦးက မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ အချိန်တွင် ပြောကြား ပါသည်။
အဆိုပါ အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြစ်မှန် ဖော်ထုတ် နိုင်ရန် အတွက် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ကို မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ တွင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပြီး မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေး ရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မိုးက ဥက္ကဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မိတ္ထီလာခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေး မှူး ဦးတင်မောင်စိုးက အတွင်း ရေးမှူး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးကျော်အေး၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ဒုတိယ တိုင်းရဲ တပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး ထွန်းနိုင်၊ မိတ္ထီလာ ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး မောင်မောင်မြင့်တို့က အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လည်းကောင်း အသီးသီး ပါဝင်ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သည် ဖြစ်စဉ်အမှန် အသေးစိတ်အား စုံစမ်းစစ်ဆေး ၍ တစ်ပတ် အတွင်း ပြန်လည် တင်ပြ ရမည် ဖြစ်သည်။
ဖြစ်ပွား နေသော ပဋိပ က္ခ များကို ဖြေရှင်းရန် ကြားဝင် ညှိနှိုင်း ပေးနိုင်ရန် အတွက် မိတ္ထီလာ မြို့တွင် ရောက်ရှိ နေသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား များ အဖွဲ့သည် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားပြီ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အခြေ အနေ များနှင့် ပတ်သက် ၍ "ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခသည် စခန်း တွေလည်း သွား တယ်။ ဆေးရုံ တွေလည်း သွားတယ်။ ကျွန်တော် မြင်တာ ကတော့ တကယ့် ရိုးရိုး သားသား ပြည်သူ တွေ ကတော့ မဖြစ် ချင်ကြဘူး။ လူတစ် စုက သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေတာ တွေ့ရ တယ်။ သာမန် ပြည်သူ တွေကတော့ အကြမ်း ဖက်ဖို့ ရည်ရွယ် ချက် မရှိဘူး။ ဆေးရုံ မှာတော့ ပစ်ခတ်နှိမ် နင်း ထားလို့ ခြေထောက်၊ ပေါင်တွေမှာ ဒဏ်ရာရထားသူတစ်ချို့ တွေ့ရ တယ်။ သူတို့ကိုလည်း အားပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကျူးကျော်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ် တာလောက် ပဲ လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ အခုကိစ္စမှာ လူတစ်စုက လိုသလိုဆွဲပြီး ဖန်တီးနေတဲ့ ပယော ဂတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒါကို သတိကြီးကြီး၊ ဥာဏ် အမြော် အမြင် ကြီးကြီးနဲ့ ထိန်းသိမ်း ကြပါလို့ပဲ မေတ္တာ ရပ်ခံ ချင်ပါ တယ်။ မနက် ကတော့ အကြမ်းဖက်တဲ့ နေရာတွေမှာ လုံခြုံရေး ၀န်ကြီး ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက် ဖြေရှင်း ပေးလို့ နည်းနည်း ငြိမ်သက် သွားတယ်။ တခြားမြို့ကြီး တွေမှာလည်း မသင်္ကာ မှုတွေနဲ့ သံသ ယတွေ ရှိနေ ကြတယ်။ ရန်ကုန်က ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွေ ပိုပြီး အဆင်ပြေ တယ် ထင်လို့ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်ကို ပြန် လာတာပါ" ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က မတ် ၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီကျော်ခန့်တွင် ပြောသည်။
လူစု လူဝေးနှင့် ဆူပူမှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ယနေ့ မွန်းလွဲ ပိုင်းတွင် ဆူပူ သူများက ရန်မျိုးအောင် ရပ်ကွက် တော်ဝင် နန်း အနီးရှိ နေအိမ် တစ်လုံး အား လည်းကောင်း၊ ကားကြီး ကွင်း အနီးမှ နေအိမ်တစ် လုံးကို လည်းကောင်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး၊ အောင်ဆန်းမြို့သစ်မှ ကျော်ဓာတ် ဆီဆိုင် ကိုလည်း ဖျက်ဆီး ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ လုံခြုံရေးအတွက် နေပြည်တော် လုံခြုံရေးတပ်မှ ရဲတပ် သားအင် အား ၁၅၀ ကျော်၊ ရမည်းသင်းခရိုင်မှ ဒုရဲမှူး သောင်းကြည် ဦးဆောင်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား ၅၀ ခန့် တို့ သည် နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုံခြုံရေး တာဝန်များ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရ သည်။
ယနေ့နံနက် အစောပိုင်းက ရန်မျိုးအောင် ရပ်ကွက်နှင့် လုပ်သားရပ် ကွက်အ တွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူမှု များကြောင့် သေဆုံးမှု ရှိနိုင်ကြောင်း သိရပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ မိတ္ထီ လာ စည်ပင်သာယာဈေးကြီး ပိတ်ထားသလို အိမ်ဆိုင်အများစုလည်း ပိတ်ထားကြသည်ဟု သိရသည်။ မြို့ပေါ် တွင် နေထိုင်သူအများစုသည် နီးစပ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေမှုလည်း ရှိနေကြောင်း သတင်းရ ရှိပါသည်။ မီးလောင် မှုဖြစ် စဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြင်းခြံ၊ ကျောက်ဆည်၊ ရမည်းသင်း၊ မိထ္ထီလာခရိုင် လေးခရိုင် မီးသတ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းပြီး မီးငြိမ်းသတ်ရေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်မင်းက Eleven Media Group သို့ ပြောကြားသည်။
ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ တကယ့်ရိုးရိုးသားသား ပြည်သူတွေကတော့ မဖြစ်ချင်ကြဘူး။ လူတစ်စုက သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရ တယ်။ သာမန်ပြည်သူတွေကတော့ အကြမ်းဖက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး။ ဆေးရုံ မှာတော့ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းထား လို့ ခြေထောက်၊ ပေါင်တွေမှာဒဏ်ရာရထားသူတစ်ချို့တွေ့ရတယ်။ သူတို့ကို လည်း အားပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကျူးကျော် မတိုက်ခိုက်ကြဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ် တာလောက်ပဲ လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ အခုကိစ္စ မှာ လူတစ်စုက လိုသလိုဆွဲပြီး ဖန်တီးနေတဲ့ ပယော ဂတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒါကို သတိကြီးကြီး၊ ဥာဏ်အမြော် အမြင် ကြီးကြီးနဲ့ ထိန်းသိမ်းကြ ပါလို့ပဲမေတ္တာ ရပ်ခံချင် ပါတယ် . . . .
မွန်းလွဲ ၁ နာရီအချိန်က စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် ကားကြီးဝင်းအရှေ့ဘက် မီးလောင်ကျွမ်းမှုသည် အခြားနေ ရာများ သို့ ကူးစက်လောင် ကျွမ်းလျက် ရှိနေပြီး သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်ရှိ AGD ဘဏ်အနီးသို့ ကူးစက်လောင် ကျွမ်းနေကြောင်း သိရသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ငြိမ်းသတ်ရန်အတွက် မီးသတ်ယာဉ် အလုံ အလောက် မရှိခြင်း၊ ရှိနေသော မီးသတ်ယာဉ်များမှာလည်း မီးလောင်ကျွမ်းရာ နေရာသို့ သွားနိုင်ရန် အတွက် လုံခြုံရေး အလုံအလောက် မရှိခြင်းတို့ကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ငြိမ်းသတ်မရ ဖြစ်နေကြောင်း မိထ္ထီ လာမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည့် Eleven Media Group သတင်းထောက်က ပြောကြားသည်။
လှည့်ကင်းစောင့်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်တန်းအား တွေ့ရစဉ်
ယခုဖြစ် စဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး"ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရဲက အရေးပိုင်ပြီ။ ရဲအရေး ပိုင်ပြီဖြစ် တဲ့အတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးရှိဖို့ ထိထိရောက်ရောက် နဲ့ ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို အသက်သွင်းဖို့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ကို ပြောခိုင်းတယ်။ အဲဒါကိုလည်း ကျွန်တော်ပြော ပြီးပြီ။ တိုင်းဒေ သကြီး ၀န်ကြီး ချုပ်ကလည်း လုပ်ပေး ပါမယ်လို့ ပြောတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အခြေအနေက မတည်ငြိမ်သေးဘူး။ တစ်ခုခုဖြစ်မှာကို ပြည်သူတွေက ကြောက်နေကြတယ်" ဟု အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်က Eleven Media Group သို့ မတ် ၂၁ ရက် ညနေ ၄ နာရီခန့်က ပြောကြားသည်။
ညနေပိုင်း အခြေ အနေမှာမူ ယမန့်နေ့ ညက ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် အခြေ အနေ ကဲ့သို့ မဆိုး ၀ါးတော့ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန် ထားသည့်အပြင် အင်းဝဘဏ်ရှိ ငွေကြေးများကို လုံခြုံသည့်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်း ရန်အတွက် တပ်မတော်မှ လာရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မြို့အတွင်းသို့ တပ်မတော်မှ ၀င်ရောက်နေ ရာယူထားသည်ဆိုသော သတင်းများ ပျံ့နှံ့ခဲ့ခြင်းကြောင်း လူစုလူဝေးဖြင့် သွားလာမှုများ လျော့ နည်း သွားကြောင်း သိရသည်။
ထပ်မံသိရှိရသော သတင်းများအရ ညနေလေးနာရီ ၀န်းကျင်တွင် မိတ္ထီလာမြို့ သီရိ မင်္ဂလာ ရပ်ကွက် အတွင်းမှ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ကလေးနှင့်လူကြီးများအား မိတ္ထီလာခရိုင် အားကစားကွင်းအတွင်းသို့ တာဝန် ရှိသူများ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သံဃာတော်များက ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်ဟုလည်း သိရ သည်။
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွင် မတ်လ ၂၁ ရက် ည ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်အထိ မိတ္ထီ လာပြည် သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ရှိလာသူ ၄၂ ဦးရှိကြောင်း မိတ္ထီလာပြည်သူ့ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက Eleven Media Group သို့ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ''ဆေးရုံကို ရောက်ရှိလာသူ ၄၂ ဦးမှာ သေဆုံးသူစာရင်းကတော့ အပြောင်းအလဲ မရှိသေး ပါဘူး။ ဒါက ဆေးရုံမှာရောက်ရှိလာတဲ့ စာရင်းပါ။ ဒဏ်ရာရသူ စာရင်းကတော့ တိုးလာပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ စာရင်းအရ ၃၇ ဦး ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံမှာမရှိတဲ့ ဆေးအချို့ကလွဲပြီး ဆေးရုံရောက်လာသူ အားလုံး ကို ကုသပေးဖို့ ဆေးဝါးလုံလောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံ ဝန်ထမ်း အင်အား ဖြည့်တင်းပြီး အချိန်ပြည့် ကုသမှု ပေးနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင် ရွက်ပေး ထားပါတယ်'' ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
မိတ္တီ လာမြို့ ပဋိ ပက္ခဖြစ်စဉ် ၏ လက်ရှိ အခြေ အနေ များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိတ္ထီလာ အမှတ် (၂) ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိ သူတစ် ဦးက ''လက်ရှိအခြေနေက အနည်းငယ် လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကိုလည်း တည်ငြိမ်စေဖို့ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်'' ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“လောလော ဆယ် လုံခြုံရေးတွေ လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ နေ့ဘက်ကလိုတော့ ဆူဆူညံ ညံတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ၉ နာရီခွဲ ဝန်းကျင်လောက်ကတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို လူနှစ် ဆယ်လောက် က ဖျက်နေတယ်လို့ကြားလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ သွားရောက်ထိန်းသိမ်းနေတယ်လို့ သိရတယ်။ အတည်တော့ မပြုနိုင်သေးဘူး။ အဲဒီလို ကောလဟာလတွေတော့ ခဏခဏ ကြားနေရတယ်” ဟု မိတ္ထီလာ မြို့သို့ေ၇ာက်ရှိနေသည့် Eleven Media Group သတင်းထောက်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
မိတ္ထီလာမြို့၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေအား သိရှိရန်အတွက် ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ် အချိန်တွင် ဆက်သွယ် မေးမြန်း ခဲ့ရာတွင် "အခြေအနေက တည်ငြိမ်နေပါပြီ။ ကောလာ ဟလ သတင်းတွေပဲ ကြားနေတာ ရှိပါတယ်။ ရဲတပ် ဖွဲ့ကို မေးမြန်း ကြည့်တော့ တည်ငြိမ်မှု ရသွားပြီလို့ ဖြေကြားပါတယ်" ဟု Eleven Media Group သတင်းထောက် က ပြောကြား သည်။
အရေးပေါ် ကာလ ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက် များနှင့် စပ်လျဉ်း...
မိတ္ထီလာမြို့ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် သေဆုံးသူ (၅)ဦး ထပ...
ခိုးယူရန် အိမ်တွင်းဝင်စဉ် လူမိ၍ ဓားဖြင့်ခုတ် တိမ်း...
မိတ္ထီလာတွင် ကွန်ယက်တွေအများကြီးရှိကြောင်း မင်းကိုန...
Eleven Media Group ကဖော်ပြတဲ့ မိတ္ထီလာမြို့ နေ့လည် ...
"မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်စိုး မှ ...
ကားကြီးဝင်းအနီး သီရိမင်္ဂလာ(ခ)ရပ်ကွက်တွင် မူဆလင်များ...
အိမ်ထောင် ဦးစီး တဦး ၀ ဥ ရှာဖွေယင်း ၀က်ဝံ အကိုက်ခံရ...
တရုတ် အိုင်ပီ လိပ်စာ ကနေ တောင် ကိုရီးယား အင်တာနက် ...
မိတ္ထီလာမြို့တွင် အခြေအနေ တည်ငြိမ်မှု မရှိသေးသော်လည်...
ကာမိုင်း ရဲစခန်းအား တိုက်ခိုက်ခဲ့သူအား KIA မှ ပြင်...
KTV ရောက်ရင် မိုက်ကိုလက်မလွတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ...
၃ တန်းလောက် ကတည်းက ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ရင်ခုန် ခ...
တာချီလိတ်မြို့ တပ်ရင်းမှူးပစ်သတ်ခံရမှု ယာဘအစည်း ၇၀...
စစ်တွေမှ ထိုင်းသို့သွားမည့် မူဆလင် ၉၀ ကျော် မြိတ်တ...
ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု နစ်နာကြေးရရေး ကော်မတီဖွဲ့